Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » भित्रभित्रै के गर्दैछ प्रधानमन्त्री कार्यालय ? यी हुन् तत्कालका आक्रामक योजना !
भित्रभित्रै के गर्दैछ प्रधानमन्त्री कार्यालय ? यी हुन् तत्कालका आक्रामक योजना !
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार तर काम सुस्त । खै यो सरकारले केही नगर्ने भो ! अचेल बजारमा प्रशस्त सुनिने टिप्पणी यही हो । के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तै पूरै सुस्त बनेको हो ? वा प्रधानमन्त्री केही गर्न खोज्दैछन् ?व्यापक जनचासोका बीच लोकान्तर डट्कमले बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग करीब दुई घण्टा बितायो । लामो कुराकानीमा प्रमुख सल्लाहकार रिमाल खुलेर प्रस्तुत भए । त्यसो भए के गर्दैछ छ ओली नेतृत्वको सरकार ? रिमालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :